को’रोना क’हरका बीच अस्ट्रेलियामा अर्को ख’तराको संकेत, दशक यताकै विशाल आँ’धी आउँदै, केही घण्टामै जमिनमा बज्रने चेतावनी ! सबैलाई सचेत रहन आग्रह, – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोना क’हरका बीच अस्ट्रेलियामा अर्को ख’तराको संकेत, दशक यताकै विशाल आँ’धी आउँदै, केही घण्टामै जमिनमा बज्रने चेतावनी ! सबैलाई सचेत रहन आग्रह,
अस्ट्रेलियाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा विशाल आँ’धी आउन लागेको र अबको केही घण्टामै उक्त आँ’धी जमिनमा ब’ज्रने बताइएको छ। केही क्षेत्रमा मुसलधारे पानी, तीव्र गतिको हावा र आठ मिटर अग्ला सम्मका छाल आउने मौसम भविष्यवाणी गरिएको छ। मौसम विभागका अनुसार यो प्रतिकूल मौसम उष्णप्रदेशीय आँ’धी माङ्गा चिसो हावासँग मिसिएपछिको परिणाम हो। अ’ग्नि तथा आ’पत्‌कालनीन सेवा विभागका वरिष्ठ अधिकारीले यो “एक दशकमा एक पटक आउने किसिमको” आँ’धी भएको बताए।
“सामान्यत: हामीकहाँ दक्षिण पश्चिमी आँ’धी आउँछ तर यो उत्तर पश्चिमी आँधी हो,” अग्नि तथा आ’पत्‌का’लनीन सेवा विभागका जन ब्रूमहलले पत्रकारहरूलाई भने।पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा अस्वाभाविक किसिमको प्रतिकूल मौसम छाउनेछ। मौसमी प्रतिकूलता सोमवारदेखि कम हुँदै जाने पनि मौसमविद्हरूले बताएका छन्। अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र सामानहरू बाँधेर राख्न भनेको बताइएको छ। पश्चिमी अस्ट्रेलियाको धेरै ठाउँमा प्रतिकूल मौसमको चेतावनी जारी गरिएको छ।
यो पश्चिम अस्ट्रेलियाका लागि विरलै हुने घ’टनाका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।तटीय क्षेत्रमा १०० किमि प्रति घण्टाको दरले हावा बहने र केही ठाउँमा त्यो गति १३० किमि प्रति घण्टासम्म रहने मौसम विभागले जनाएको छ। केही क्षेत्रमा १०० मिमि सम्म पानी पर्नसक्ने भनिएको छ। यो मौसम प्रणालीले आइतवार पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा हान्नेछ भने सोमवारसम्म त्यस्तै अवस्था रहने पनि आकलन गरिएको छ।
उनका अनुसार यस प्रकारका मानसिक रो’गबाट बच्न १० बजे सम्मको समयसी’मा तोक्न आवश्यक छ । मानिसहरुले त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल चलाउनमा रोक लगाए स’मस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ । विशेषगरी शहरमा चौबीसै घण्टा बत्तीको मुनि बस्ने मानिसहरुका लागि मोबाइलको अधिक प्रयोगले ग’म्भीर समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ ।
पहिरोले घर पुरिँदा एक युवतीको मृत्यु
विद्यार्थीहरूका लागि क्यान्टिनसहितको ‘पढ्ने कोठा’ बनाइदिए सम्मान स्वरुप सेयर गरौ
भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ गुणहरू, तपाईसग छन? हेर्नुहोस के के हुन ती गुणहरू ! जानी राखौ